Madaxweynaha Somaliland Oo Baabiiyay Heshiiskii U Dhexeeyey Xukuumadda Somaliland Iyo shirkadda Gacanta Ku Haysay Haamaha shidaalka Berbera | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Xukuumadda Somaliland ayaa baabiisay gebi ahaanba heshiiskii ay kula jirtay shirkadda maamusha Haamaha Shidaalka ee Berbera. Kadib markii ay ka baxday heshiiskii ay ku jirtay, isla markaana aanay mudo laba sannadood ku dhow aanay wax shidaal ah keenin. Sidoo kalena laga
waayay wax xisaab celin ah.
Sidaana waxa lagu sheegay qoraal saxaafadeed kasoo baxay qasriga Madaxtooyada, iyadoo Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) kusoo saaray xeer Madaxweyne.
Qoraalkaa oo saxaafada loo mariyay xafiiska Af-hayeenka Madaxweynaha ayaa u dhignaa sidan:- “Madaxweynaha SomaMadaxweynaha JSL, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (siilaanyo) waxa uu maanta soo Saaray xeer madaxweyne oo numberkiisu yahay NO: 0131/052011 .
9. Haamaha Shidaalka ee Berbera.” Ayaa lagu yidhi qoraalka.
Shirkadda Total ayaa mudo konton sannadood ah la gashay dhawr iyo sagaashanaadkii xukuumaddii marxuum Cigaal heshiis ay kula wareegay maamulka haamaha shidaalka iyo keenista dalka ee shidaalka, balse heshiiskaa ayaa golihii wakiilada ee waqtigaasi ku gacan saydheen, balse Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ayaa xiligii kaanbeynka ee ololaha doorashada balanqaaday inay heshiiska shirkadaa dib u eegis ku samaynay.